Degdeg: Eng Faysal Cali Waraabe Oo Luuqad Adag Kula Hadlay Madaxweyne Biixi Iyo Dr Cirro | Hangool News
Degdeg: Eng Faysal Cali Waraabe Oo Luuqad Adag Kula Hadlay Madaxweyne Biixi Iyo Dr Cirro
May 17, 2019 - Written by Hangool News 1
Eng Faysal Cali Waraabe oo shir jaraa’id kaga hadlay xaaladda dalka ka taaggan iyo xadhigga Xildhibaan Dhakool ayaa sheegay in xildhibaankaasi khalad weyn sameeyay xadhiggiisuna yahay mid sharci ah “Xildhibaan Dhakool haddii aan la xidhin shacbiga dili lahaa,” sidaas ayaa ka mid ah hadalka Eng Faysal Cali Waraabe.
Hoggaamiyaha xisbiga UCID oo si cadho leh u hadlayay ayaa bulshada Somaliland ugu baaqay in aanay Qaranka u dumin cadho ay u qabaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi “Muuse waa la saluugsan yahay aniguna waan saluugsanahay,” Sidaas ayuu yidhi Eng Faysal.
Waxyaabaha uu ku dhalliilay madaxweyne Biixi waxa ka mid ah in uu meesha ka saaray talo wadaagga isu tanaasulka Somaliland ku soo caano maashay iyo in aanu qaadan tallooyinka.
Eedo u muuqda in uu ula jeedo Dr Cabdiraxmaan Cirro ayuu ku sheegay in degdeg iyo dad kicin uu kaga jawaabay xadhigga Dhakool. Dr Cirro wuxuu sharci darro ku tilmaamay xadhigga Dhakool inkasta oo uu sheegay in aanu Dhakool ku waafaqsanayn dhalliishiisa 18 May.
Eng Faysal waxa kale oo uu dhalliilay Prof Samatar iyo Cali Khaliif oo uu ku dooday in ay dhallinyarada been ku akhriyayaan iyaga oo hore uga soo quustay Muqdisho “Ma reero ayaynu u xisaabtana oo Somaliland ayaynu iska laalaabna aynu reerro isu dillo oo barkado isku qabsanee, waxaasi waa wax gaboobay dal casri ah ayaynu dhisayna insha Allaahu tacaala,”ayaa hadalkiisa ka mid ahaa.
Filo faahfaahinta shirka jaraa’id ee Eng Faysal